About Us - Dreams 1000 Co., Ltd.
Welcome to Dreams 1000 Co., Ltd.
Trust Tech Co., Ltd.
Dreams 1000 Co., Ltd.
Dreams 1000 Co., Ltd. >>> Tel: +95 095000278, 09264675557 >> Email: info@dreams1000.com.mm
| | Hits: 2254
Dreams 1000 Co., Ltd. သည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေနှင့်အညီ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ(၁၄) ရက်နေ့တွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ လုံခြုံရေး စနစ် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ATM နှင့် ပတ်သက်သော စက်ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ Sites အရောက်ပေးသွင်းခြင်း၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများအား အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်း နာမည် ကောင်းဖြင့် အောင်မြင် လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီဖြစ် ပါသည်။
နိုင်ငံတော်အနေဖြင့်လည်း အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံများနှင့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတွင် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာတွင် ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ၊ နည်းပညာ အကူအညီ ရယူဆောင်ရွက်ခြင်းများအပြင်၊ နိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများ ဘဏ်စုံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
Dreams 1000 Co., Ltd. သည် ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နိုင်ငံများဖြစ်သော ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ စင်္ကာပူနှင့် ဗီယက်နမ် စသည့် နိုင်ငံများနှင့်လည်း အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင် လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးအမြတ်ရရှိစေရန် ရည်ရွယ် လျက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပါသည်။ Dreams 1000 Co., Ltd. အနေဖြင့်လည်း ရှေ့လုပ်ငန်း စဉ်များကို အစဉ်တစိုက်ကြိုးစား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Dreams 1000 Construction Co., Ltd.
Dreams 1000 Construction Co., Ltd. မှ အောက်ပါ လုပ်ငန်းများကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည် -
(မြေရှင်+ကန်ထရိုက်တာ) အကျိုးတူစနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
(ပစ္စည်း+လုပ်အားခ) (ပုတ်ပြတ်) (P.A.E) စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာများ ကိုယ်တိုင် လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်၍ Foundation လုပ်ငန်းမှ စတင်ကာ ( Interior Decoration Design) များအထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
အခြားကန်ထရိုက်တာများနှင့် ဆောက်လုပ်သော ကန်ထရိုက်တိုက်ခန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အဆောက်အဦးများ အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းမီစေရန် (Quality Control Service) အနေ
ဖြင့် မြေရှင်များ ကိုယ်စား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီ Japan Architect Co., Ltd. ၏ Japan Architectural Design များအား ပုတ်ပြတ်နှုန်းထားတစ်ခုဖြင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်များအား ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
River Sands, Shingless and Chippings
ပြည်မြို့ ကျောက်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း
Sand Filling Work
Copyright © 2021 Dreams 1000 Co., Ltd. Rights Reserved.
﻿ Developed by MMITSG.